musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Fiji Breaking Nhau » Fiji inosundira kunzvimbo yekushanyazve kuvhurwa muna Zvita 2021
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Fiji Breaking Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Jekiseni rega rega rinounza Fiji nhanho imwe padhuze nekukwanisa kugamuchira vaenzi vekunze kuzvitsuwa zvakare.
Vanopfuura makumi mapfumbamwe nemaviri muzana yevafiji yakatarwa yevagari vakagashira wekutanga mushonga weCOVID-92.
Tourism Fiji inotangisa chirongwa chitsva chemuno kukurudzira kubaya nhomba.
Fijian indasitiri yekushanya yakagashira kwese Kuchengetedza Fiji Kuzvipira.
Iine pamusoro pe92% yehuwandu hwevanhu vanogamuchira dosi yavo yekutanga yekudzivirira yeECVID-19 uye pamusoro pe41% ikozvino vabaiwa zvizere, Fiji iri kuita fambiro mberi yakanangana nechinangwa chayo chekuvhurazve muna Zvita 2021, sezvo jekiseni rega rega rinounza Fiji nhanho imwe padhuze nekuve inokwanisa kugamuchira vaenzi vepasi rese kuzvitsuwa zvakare.
"Tiri pamharadzano zera idzva rekufamba nekushanyirwa uko kutangazve kwekufamba kwenyika kwakanamirwa pabara resirivheri - mushonga we COVID-19," akadaro Gurukota Rezvekutengeserana, Kutengeserana, Tourism uye Kutakura, Hon. Faiyaz Koya. "Kubaya vanhu vavanotarisira hakungovimbise kuti tinochengetedza nharaunda dzedu, asiwo kuti takagadzirira kugamuchira nyika kudzoka kumahombekombe edu uye kudzorera maFijians kumabasa avanoda."
Sechikamu chegadziriro dzekuvhurazve Fiji, Tourism Fiji yatanga chirongwa chitsva chemuno chekukurudzira vese veFiji kuti vabaiwe jekiseni uye vagadzirire kufamba kuzotangazve kana zvirambidzo zvabviswa. Iyi meseji yakapusa, asi yakakosha: "Ndiko kupfura kwatinoita pakufamba: kubaiwa majekiseni uye kugadzirira." Mushandirapamwe unobatana paMessage Tourism meseji yekugovana rutsigiro rwakafanana nekukurudzira kubaya nhomba muFiji.
Kuchengetedza hutano hwakanyanya uye kuchengetedzeka kwevose vafambi uye veko pamiganhu kuvhurwa, iyo Indasitiri yekushanya yeFijian yakagamuchira zvakanyanya Kuchengetedza Fiji Kuzvipira; mwero unobvumidzwa neWHO weyakanakisa-tsika hutano uye chengetedzo matanho akagadzirirwa kuenzanisa iwo maindasitiri nenzira dzakachengeteka dzekufamba mune yepashure-COVID yenyika. Vashandisi vezvekushanya vari kushanda kuti vabate 100% yejekiseni revashandi vese vanokodzera uye vanogashira iyo CFC 100% Vaccamp Stamp kana yapera. Parizvino, pane 46 nzvimbo dzekuchengetera Fiji dzakawana 100% yekudzivirira kwevashandi vavo.
Pamusoro pezvo, Tourism Fiji yekuNorth America yakatanga chirongwa chekushambadzira chinofambidzana, chinonzi "Tsvaga Bula Yako" kukurudzira vatengi kutanga kurota uye kuronga kwavo kwakakwana kuenda kuFiji. Mushandirapamwe uyu wakanangana nemibvunzo yekubatsira vafambi kuti vawane yavo 'Bula' uye vagamuchire mazano ekufamba anoenderana nezvavanoda. Mushandirapamwe unoitisa kukwazisa kweFijian "bula" - izwi rine zvirevo zvakawanda zvinosanganisira mhoro, mufaro, hutano hwakanaka, uye simba rehupenyu.